Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Nokuti nyika duku, Belgium ine akanaka mugove yomufaro chitima nzendo dzakawanda zvinoshamisa pamberi kuona. MuBelgian Mahombekombe iguru nzira dzokuzorora uye vanakidzwe pamushana uye 65 makiromita kubva pamhenderekedzo, kune zvakawanda zvinonakidza zviitiko zvegungwa ku…
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Zvinogona kunzi Switzerland chinonyanya kuzivikanwa nokuda kwayo chando nenhongonya uye zvinonaka chokoreti, asi kune zvakawanda yakaisvonaka kunyika pane zvinoonekwa neziso. Chitima Trips muSwitzerland ndeimwe yenzira kunakirwa wakanaka mumaruwa….
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi kudya Best kudya pamusoro nezvitima vari mazuvano chaizvoizvo richinaka kwazvo. Nekuti nezvitima akawanda kupa 5-nyeredzi pekugara uye kirasi yokutanga chikafu. Izvi zvinosanganisira zvokudya chinoitirwa nyika chef akakurumbira. Iwe unogona kunge wajaira kuverenga nezve chinoshamisa chikafu muzvitima zvezvitima kana nzvimbo dzakanaka iwe…
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Italy ane zvimwe zvinoshamisa chitima nzendo. It ane vanoverengeka nezvitima akanaka uye nemasango pazviteshi munyika, asi apo nokusingaperi akanga wokutanga chitima rwendo yakaitwa Italy? Chinyorwa ichi chakanyorerwa kudzidzisa nezve Chitima Kufamba uye chakagadzirwa naSave A…